ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များ | ပတ်ဝန်းကျင် | ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှုများ | Samsung Myanmar
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတိပြုအလေးအနက်ထားသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
ကျန်းမာသော ကမ္ဘာမြေအတွက် ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ကျန်းမာသော ကမ္ဘာမြေအတွက် ဖြစ်သည်
Samsung Electronics သည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ စီမံရေးဆွဲသည့် အခိုက်အတန့်မှ စတင်၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ နောက်ဆုံး စွန့်ပစ်ချိန်အထိ -- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဓိက ဦးစားပေး အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 2004 မှ စတင်၍ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေဟသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အီကိုဒီဇိုင်း လုပ်ငန်းစဥ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြေများကို စနစ်တကျ အသေးစိတ် လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ထိန်းသိမ်းပြီး၊ အသစ် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့ချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားချိန်ထိတိုင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ပြောင်းလဲအသုံးချနိုင်ကြောင်း သေချာစေခြင်းအထိ ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်အပိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ၎င်းကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟစနစ်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ KPIs ကို ကျော်လွန်စေရန် ကြိုးပမ်းပါသည်
* 2020 ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များ
အဓိက ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများ
Samsung Electronics သည် ၎င်း၏ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုစနစ်အား အသုံးပြုပြီး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်မှစတင်၍ ၎င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများအား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုစနစ်အား အများပြည်သူလူထုမှ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုရီးယား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များထံသို့ ပေးအပ်သည့် အသိအမှတ်ပြုလွှာဖြစ်သော Eco-Label အသိအမှတ်ပြုလွှာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု ကိရိယာ (EPEAT) အသိအမှတ်ပြုလွှာ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အိမ်သုံးပစ္စည်း စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ အဖွဲ့အစည်း (AHAM) အသိအမှတ်ပြုလွှာ အစရှိသည်တို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များတို့အား လက်ခံကျင့်သုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
အဆင့်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ နှင့် စွန့်ပစ်မှုအဆင့်များအနှံ့ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်းစက်ဝန်းတစ်ခုလုံး၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန် သက်တမ်းစက်ဝန်း အကဲဖြတ်မှု (LCA) ကို လုပ်ဆောင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်အကောင်အထည်ဖော်မှုရှိ ရလဒ်များတွင် ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ဥပမာ၊ 2019 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Underwriters Laboratories (UL) ထံမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ကြေညာချက် (EPD) ကို ရရှိခဲ့စဉ်အတွင်း 24-လက်မ မော်နီတာ (မော်ဒယ်- S24E650PL) တွင် LCA ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြိုထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် စွန့်ပစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိ1) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုအမျိုးအစား 12 ခုမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပူနွေးလာမှုပေါ်တွင် မော်နီတာ ထုတ်ကုန်များ၏ သက်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘အသုံးပြုမှု’ အဆင့်တွင် အဆင့်များအားလုံးမှ 76% အထိ အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်။ ‘အသုံးပြုမှု’ အဆင့်အတွင်း အသုံးပြုသော လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏအများအပြားကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရလဒ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်မှ ထိုရလဒ်များကို ထင်ဟပ်စေခြင်းဖြင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် မော်နီတာများ၏ အရန်သင့်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းပါမည်။
အောက်ခြေမှတ်စု- 1) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဓိက သက်ရောက်မှုအမျိုးအစား 12 ခု- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပူနွေးလာခြင်း၊ အက်ဆစ်သဘာဝ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ရေဓာတ်များပြောင်းလဲလာခြင်း၊ အိုဇုန်းဓာတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊ ဖိုတိုဓာတ်ပေါင်းဆိုင်ရာ အောက်စီဒင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ လူသားများ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ရေသန့်တွင် ဂေဟအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ပင်လယ်ရေတွင် ဂေဟအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ မြေကြီးတွင် ဂေဟအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ အခြေခံစွမ်းအင် အသုံးပြုမှု၊ ရေသုံးစွဲမှု၊ နှင့် အမှိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
24-လက်မ မော်နီတာ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပူနွေးလာခြင်း သက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်မှု၏ရလဒ်များ(S24E650PL)
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုးအလျော့၊ အပေးအယူလုပ်ခြင်း မရှိစေရ” ဆိုသည့် စည်းမျဉ်းအောက်တွင် Samsung Electronics သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာများကို အနီးကပ် စီမံခန့်ခွဲပါသည်။
"သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုးအလျော့၊ အပေးအယူလုပ်ခြင်း မရှိစေရ"" ဟူသော မူစည်းမျဥ်းနှင့်အညီ Samsung Electronics သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာများကို အနီးကပ် စီမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်ပါသည်။ ပိုမိုတင်းကြပ်သော နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း ထုတ်ပြန်ချက်များဖြင့် တစ်ညီတည်းရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော အရာများအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ’ အား ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အားလုံးသော အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပေါ်တွင် တိကျသေချာသော ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကန့်သတ်ထားသော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုသာမက ပိုလီဗီနိုင်းလ် ကလိုရိုဒ် (PVC) ၊ ဘရိုမီနိတ်တက် ဖလိမ်း ရီတားဒန့် (BFR များ)၊ ဘယ်ရီလီယမ်နှင့် အန်တီမိုနီ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အလွန်ပင် အမှားအယွင်းမခံ တုံ့ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ခြေရှိသည့် အရာများ အစရှိသည်တို့ကို အသုံးပြုရာတွင် ဖော်မြူလာထုတ်ထားသော လျှော့ချမှု အစီအစဥ်များအားလည်း မိမိတို့အစီအစဥ်ဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ဤကာလတစ်လျှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာများ အသုံးပြုမှုကို အဆက်မပြတ် လျှော့ချလျှက်ရှိပါသည်။
Samsung Electronics သည် EU ၏ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများအပေါ် ကန့်သတ်မှုပြုသော (RoHS) ညွှန်ကြားထုတ်ပြန်ချက်မတိုင်မီ နှစ်နှစ် ကြိုတင်ပြီး 2004 ခုနှစ်ကတည်းကပင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာများအား ကြိုတင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေလျှက် ရှိပါသည်။ EU မှ ၎င်း၏ ညွှန်ကြားချက်အား မထုတ်ပြန်မီကတည်းကပင် လုပ်ငန်းအတွင်း၌ တင်းကျပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုအား ထုတ်ပြန်ရန်အတွက် တွန်းအားသည် စင်စစ် Samsung Electronics ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့ အဓိကအာရုံပြုအလေးအနက်ထားသော စီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားခံယူချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ 2005 မှ စတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာများနှင့် အငွေ့ပြန်လွယ်သော အော်ဂဲနစ် ကွန်ပေါင်းများအား လေ့လာဆန်းစစ်ရန်အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုအား တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု စနစ်တစ်ခုအား တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဓာတ်ခွဲခန်းကို ကိုရီးယား ဓာတ်ခွဲခန်း တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု စီမံချက် (KOLAS) ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး 2019 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာ ခွဲခြမ်းလေ့လာမှုများနှင့် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထပ်တိုးပေးခဲ့ပါသည်။
ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော အရာများကို အမျိုးအစားခွဲခြားမှု
ပစ္စည်းများကို ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအတွက်
ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအရ စည်းကမ်း သို့မဟုတ်
Samsung Electronics ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားရမည့်အရာနှင့်ဆိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှု နောက်ခံသမိုင်း
ဖဲလိတ်များ၏ ထပ်ဆောင်းအမျိုးအစားရှစ်မျိုး မျိုးအစားရှစ်မျိုး အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည် (DINP,DIDP,DNOP,DnHP, DMEP,DIPP,nPIPP,DnPP)
လေအေးပေးစက်များနှင့် လေသန့်စင်စက်များ၏ စစ်ထုတ်သည့်အရာ များပါရှိသ ထုတ်ကုန်များအတွက် ပိုးသတ်သည့်အရာ/ မတိုက်စားစေသည့်အရာများ အသုံးပြုမှုက တားမြစ်ခဲ့သည် (PHMG,PGH,PHMB,CMIT,MIT)
·အစိတ်အပိုင်းမ အားလုံးအတွက် ဖဲလိတ်အမျိုးအစားလေးမျိုး အသုံးပြုမှုက တားမြစ်ခဲ့သည်(DEHP,BBP,DBP,DIBP)
အစိတ်အပိုင်း သစ်များအတွက ဖဲလိတ်အမျိုး အစားလေးမျိုး အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည် (DEHP,BBP,DBP,DIBP)
hexabromocyclododecane (HBCD) နှင့် nonylphenol အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည်
ဖဲလိတ်နှင့် အန်တီမိုနီ မပါဝင်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ (လက်တော့ပ်များ၊ တီဗီများ၊ မော်နီတာများနှင့် အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတို့၏ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများ)အား ထုတ်လုပ်ခဲ့သည
· PVC-မပါဝင်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ (လက်တော့ပ်များ၊ cတီဗီများ၊ မော်နီတာများနှင့် အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတို့၏ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများ) အား ထုတ်လုပ်ခဲ့သည
· မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် MP3 ပလေယာတို့တွင် ကလိုရင်းဖြင့်ပိုးသတ်ထားသော မီးတောက်ဟန့်တားမှုများ အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည
ဘယ်ရီလီယမ် ကွန်ပေါင်းများ လုံးဝ မပါဝင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းများအား ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ကိုဗော့ကလိုရိုဒ် အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည်
BFRs နှင့် PVC တို့ လုံးဝ အကောင်အထည်ဖော်ထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ကင်မရာများနှင့် MP3 ပလေယာများအား ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
· perfluorooctanesulfonic နှင့် အန်တီမိုနီကွန်ပေ အက်ဆစ် (PFOS) ါင်းများ and အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည
· BFRs နှင့် PVC လုံးဝမပါဝင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (မော်ဒယ်အချို့)
BFRs နှင့် PVC tအသုံးပြုမှုအား လျှော့ချရန် အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ခဲ့သည
· ထုတ်ကုန်များတွင် PBB နှင့် PBED အသုံးပြုမှုနှင့် ထုပ်ပိုးသည့်ပစ္စည်းများတွင် BFRs အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ခဲ့သည်
· BFRs အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်မဏ္ဍိုင်ကို အကောင်အထည်ဖော်သည် (ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက တိုးတက်မှု)
· ကဒ်မီယမ် (Cd)၊ ခဲသတ္တု (Pb)၊ မာကျူရီ (Hg) နှင့် hexavalent chromium (Cr6+) တို့ကို လုံးဝ ဖယ်ရှားခဲ့သည်
· ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုပစ္စည်းများအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းများအား မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုပစ္စည်းများအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ
REACH SVHC ကြေညာချက်
အနီးကပ် စီမံခန့်ခွဲရန် Eco-Partner
Samsung Electronics သည် ထုတ်ကုန်များသာမက အစိတ်အပိုင်းများကိုပါ အနီးကပ်ဆန်းစစ်ရန် ထုတ်ကုန်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအားလုံးပေါ်တွင် Eco-Partner အကဲဖြတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်မှုအတွက် စံနှုန်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တို့အပေါ် ၎င်းတို့၏ လေးစားလိုက်နာမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုမှုကို ပေးအပ်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကုမ္ပဏီထံမှ ဒေတာများနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအချက်အလက်များ၏ အထောက်အထားတို့ပါဝင်သော ထုတ်ကုန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် Samsung Electronics သည် တင်ပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုစစ်ဆေးရန် ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၏ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များထံ သွားရောက်ခြင်းဖြင့် စေ့စပ်သောအကဲဖြတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ Eco-Partner အသိအမှတ်ပြုမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများကို နှစ်နှစ်ကြာတိုင်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကာ၊ စစ်ဆေးမှုကို မအောင်မြင်သူများအား ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်မှ ဖယ်ရှားပါသည်။ ထိုသို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိမ်းလန်းမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ပဏာမခြေလှမ်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ ပါဝင်လာရန် ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်။ တစ်ကြိမ်အကဲဖြတ်မှုထက်စာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျိုးပြုနိုင်သော ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက် စီမံခန့်ခွဲမှုကို သေချာစေရန် ဆက်တိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကဲဖြတ်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
2. ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ပေါင်းစပ်
အစီရင်ခံစာ (ICP/GCMS Data)
4. အတည်ပြုချက်အတွက် နမူနာ
1. တင်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်းများ
နှင့် နမူနာများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု
Samsung Electronics သည် စွမ်းအင်ခြွေတာရန် နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်၍ စူးစမ်းလေ့လာနေပါသည်
Samsung Electronics သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ စွမ်းအင် ပို၍ လျော့နည်းစွာ အသုံးပြုသည့် မြင့်မားစွာ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စဥ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစားအားထုတ်လျှက် ရှိပါသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် စွမ်းနည်းအနည်းကျဉ်းကိုသာအသုံးပြုပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဆိုပါက သုံးစွဲသူများသည် စွမ်းအင်ပိုင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို ချွေတာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝါအား ထုတ်လုပ်ရန် ပိုမိုလျော့နည်းသော စွမ်းအင်အား အသုံးပြုပါက အစိမ်းရောင်ဖန်လုံအိမ် ဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လွှင့်မှုများ လျော့နည်းသွားသည့် ရလဒ်ကိုလည်း ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။ 2020 တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိ၍ စွမ်းအင် ထိရောက်မှုရှိသော နည်းပညာများ အသုံးချခြင်း၏ ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုအား 2008 နှင့် နှိုင်းယှဥ်ပါက 32% ပို၍ နည်းပါးသွားစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းအင် ထက်ဝက်ခန့်မျှသာ အသုံးပြုပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည် ဤနေရာတွင်ပင် ရပ်တန့်နေမည် မဟုတ်ပေ -- စွမ်းအင် အသုံးပြုမှုအား ပို၍လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရှိသည့် နည်းပညာကို ဖွံ့ဖြိုးဆောင်ရွက်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
Samsung Electronics ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများအား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အသိအမှတ်ပြုသည်
Samsung Electronics ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ဂေဟစနစ် အမှတ်အသားများနှင့် ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု အညွှန်းများ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့သော ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များအား ပေးအပ်ခံထားရသည့် နေရာများဖြစ်သော ယူအက်စ်၊ ဥရောပ၊ တရုတ် နှင့် ဘရာဇီးတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတော်တော်များများ၌ ၎င်းတို့၏ ဂေဟစနစ်ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုခံရမှုကို ရရှိထားပေသည်။ ဤသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ပထမနေရာတွင် ဦးစားပေးထားရှိသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား အဆင့်မြင့် နည်းပညာများအသုံးပြု၍ လေ့လာ၊ အကောင်အထည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် ဤနေရာတွင်ပင် အဆုံးမသတ်သေးပေ Samsung Electronics သည် ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် ‘PlanetFirst’ မျှော်မှန်းချက်အား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေထိုင်မှုဘဝအား သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိစေရန်အတွက်လည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ecolabel များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန် ကြေညာချက်များ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားသော ထုတ်ကုန်များ